Indlela Yokufumana Iindlela Ezona Zilungelelwano Ngokusebenzisa ii-Seven ze-Twitter ze-Tips SEO kwi-Semalt
I-Twitter yenza isivumelwano kunye ne-Google eyenza ukuba iifayile ezili-140 zikhangeleke kwi-intanethi. Kamva, i-Twitter yanika iGoogle ufikelelo olupheleleyo kuyo yonke i-tweets yayo, eyaziwa ngokuba yi "Firehose." I-Google ibeka ngokubaluleka kumagunya asekuhlaleni kunye nenani labalandeli njengento ephambili kunye nokukhetha oko ukubonisa. Ngenxa yoko, ukuba nobukho obunentsingiselo kwi-Twitter kubalulekile kwaye kulungelelanisekile. Kule nkalo, uJack Miller, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo we-8 (Semalt , uveza iingcebiso ezilandelayo ze-Twitter zokufaka ukuthengisa:
Njalo gcina ukuvumelana ngokusebenzisa amagama angundoqo afanayo eza kuvela kwiwebhusayithi. AmaHashtag aphucula ukukhangela kwaye ancede aqondise abantu kumxholo. Ukuguqula amagama angundoqo kwii-hashtag, ngoko ke, kuza kufumaneka xa abantu befuna izihloko ezithile. Musa ukusebenzisa amaninzi ama-hashtag kwi-tweet enye nje ngokuba ingabonakala ngathi i-spammy kwaye ikhuphe abalandeli. Qiniseka ukuba uhlalutye ii-hashtag ezinokubambisana, ukuthandwa, okanye ukukhutshwa kwempendulo kunye nokuzisebenzisa ukulungiselela iprofile yakho. I-analytics ye-Twitter kufuneka incedise ukuba yintoni eyona nto ibalulekileyo kwi shishini. Qinisekisa ukuba i-tweet inolwazi oluninzi oluchanekileyo kuyo, kunye neentlobo ezininzi zeendaba ezinokubandakanya izilinganiso ezili-140.
Phakamisa iProfayile ye-SEO
Ukuqinisekisa ukuba ukulungiswa kwiprofayili yakho kukuqinisekisa ukukhangela kwayo. Xa abasebenzisi basebenzise amanani kumagama abo abasebenzisi okanye abaphetheyo, banokuchaphazela kakubi izinto ezimbini zeprofayili yoshishino, njengoko iGoogle iya kubaphatha njengegaxekile.
Ukuguqula iziphatho okanye amagama omsebenzisi kulula..Nangona kunjalo, iingcali azicebisi njengokuba zidibanisa abasebenzisi kuba ibheji yokuqinisekisa ihamba kunye negama. Iibheji zokuqinisekisa yintoni abasebenzisi abathembele kuzo ukuba baxelele ukuba iprofayili iquka ulwazi oluchanekileyo nolungqinisisiweyo malunga namaqumrhu ebhizinisi okanye amanani aseburhulumenteni.
I-Google yenza inkcazo yokwenza inkcazo ye-bio enikezelwe kwiprofayili ye-Twitter. I-bio yazisa abantu ukuba balindele ntoni kwiifayile ezivela kwiprofayili ethile. Kwiimpawu ezili-160 ezibonelelwe, ukulula kunye nokuchaneka ziintlonelo zakho ezilungileyo. Nika iinkalo ezibalulekileyo kwiindlela ezikhuselekileyo kwaye ukhumbule ukuquka inqanaba lobuchule. Ukuba kukho ezinye ii-akhawunti ze-twitter, zibandakanya okufanayo kubo bonke ukuqinisekisa ukuguqulwa komsebenzi kubasebenzisi.
Lungisa iPhoto yeSithombe
Ngaphambi kokuba ulayishe isithombe, qinisekisa ukulungisa igama lefayile. Iingcebiso ezimbalwa kule nto ukuqinisekisa ukuba iqulethe amagama angundoqo, okanye ukwahlula amagama angundoqo usebenzisa i-dashes eyenza kube lula ukutsalathisa nge- injini yokukhangela .
Njengawuphi na umkhankaso we-SEO campaign , kufuneka kubekho umnxeba kwisenzo kwisitye esiya kufakwa kwi-website yekhonkco kwi-Twitter. Qinisekisa ukuba yeyiphi na iphepha lewebhu elifanelekileyo kakhulu kwiinkcukacha ezibonelelwe kwiprofayili, kwaye apho umntu angathanda ukuthumela abalandeli bakhe. Ukuqhagamshelana kwe-Mutual kudala ezinye izithuthi kunye nokwandisa ukuthembeka.
Ii-Retweets zinceda ukwandisa i-traffic, ngoko unokuziva ukhululekile xa ucela ukwabelana. Ukuze wenze indawo yokubhaliweyo, bhala izibuyekezo ezimfutshane njengoko kuvumela abantu ukuba bafake izimvo okanye bathethe abanye abantu xa bekhumbuza.
ndakanya iiprofayili zentlalo kwiziphumo zophando
Qinisekisa ukucacisa ukuba yeyiphi enye inxalenye yoluntu yoluntu eneyona nto ikhethiweyo kwaye iquka ikhowudi yokubhalwa kwewebhusayithi.